Cameron.....: မိုးစက်အောက်က ပန်းကလေး.....
မိုးတွေရောက်လာခဲ့ပြန်ပြီအိန်ဂျယ်……..ဒါပေမယ့် အေးမြမှုတွေက ပျောက်ဆုံးနေကြတယ်….။
မိုးတွေရောက်လာချိန်မှာ မင်းဘာလုပ်နေခဲ့သလဲ….။ မင်းရုံးခန်းအပြင်ဖက်က ကွင်းပြင်ကိုပြေးပြီး ကြိုဆိုလိုက်သလား… ဒါမှမဟုတ် အိမ်မှာရှိနေလို့ ရပ်ကွက်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဘောလုံးဆင်းကန်နေခဲ့သလား….။ အိမ်ရှေ့ထွက်ပြီး မိုးစက်တွေကို ခပ်ငိုင်ငိုင်ကလေး ငေးမိနေခဲ့သလား…။
ကိုယ်ကတော့ မိုးကိုသံစဉ်တစ်ခုလိုနားထောင်ရင်း စကားလုံးတွေသီနေခဲ့တယ်…….။ ညနေ ထီးကလေးစောင်းပြီး မိုးရေထဲကနေ အိမ်ပြန်ခဲ့ရတာကို ပျော်နေခဲ့တယ်… မင်းကိုလည်း သတိရင်းနဲ့လေ…။
သနပ်ခါးရေကျဲခပ်ပါးပါးလေးလိမ်းနေရင်းနဲ့ “မမ သနပ်ခါးလိမ်းတာ ကျွန်တော်တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးသေးဘူး”လို့ ပြောခဲ့တဲ့ မင်းကို သတိရသွားတယ်…။ ခုချိန်မှာ သနပ်ခါးပါးကွက်လေးနဲ့ ကိုယ့်ကိုမြင်တွေ့ခွင့်ရရင်… “မမပါးပြင်က သနပ်ခါးလေးနမ်းမွှေးကြည့်စမ်းချင်ရဲ့”လို့ မင်းပြောလေမလား အိန်ဂျယ်… ဟင်…။
ပခုံးကျော်နေပြီဖြစ်တဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ဖီးရင်းလည်း မင်းကို သတိရတယ်….။ ကိုယ်ဆံပင်ညှပ်လိုက်တုန်းက “ဘာပုံကြီးမှန်းလည်းမသိဘူး”လို့ မျက်မှောင်လေးကျုံ့ပြီး အလိုမကျဖြစ်နေတဲ့ မင်းကို မြင်ယောင်မိသွားခဲ့တယ်…။ ဘာကြောင့် မင်းတို့ယောကျာ်းလေးတွေက မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ဆံပင်ရှည်မှ ကြိုက်ကြတာလဲ….။ ဆံပင်ရှည်လေးနဲ့ဆို ယဉ်တယ် မိန်းမဆန်တယ်လို့မြင်ကြ လို့မဟုတ်လား….။ ကိုယ်ကတော့ မိန်းမမဆန်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ပါ….။
နေ့လည်တုန်းက ဓါတ်ပုံအဟောင်းတွေပြန်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကျောလည်ကျော်ကျော်အထိနွယ်ခွေကျနေတဲ့ ကိုယ့်ဆံပင်တွေကိုမြင်ရတော့ ညှပ်ပစ်ခဲ့မိတာကို နောင်တရမိသလိုလိုခံစားမိသွားသေးခဲ့တယ်….။
မိုးဦးရဲ့ မိုးစက်ပေါက်အေးတွေအောက်မှာ… ယိမ်းနွဲ့နေတဲ့ ပန်းကလေးတွေ မင်းဆီကို ရနံ့တချို့ သယ်ဆောင်လာလိမ့်မယ်…. မိုးကိုမြင်လို့ မင်းသာ ကိုယ့်ကို သတိရလွမ်းဆွတ်ခဲ့ရင်ပေါ့..အိန်ဂျယ် …..။
Posted by coral nyo at 01:32
“Understanding is deeper than knowledge. There are many people who know you, but very few who understand you"
Me and My Mom ကျွန်မတို့ စလေမြို့ကနေ ထမင်းစားပြီး ချောက်မြို့ကိုပြန်ဖြတ်ပြီး ကန်ပက်လက်ကို လေးနာရီ ထပ်မောင်းရတယ် ညနေမစောင်းခင်ေ...
ဒီပုံက သူများဆီကသွား မ လာတာ ခေါင်းစဉ်ကို ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် တိမ်တွေနေတဲ့အရပ်ဆီလို့ ပေးထားပေမယ့် တကယ်တမ်း တိမ်ပင်လယ်ပုံတွေကို တစ်ပုံမှ...
နတ်မတောင်ကဆင်းလာပြီးနေလည်စာစား ခနနားပြီး ညနေသုံးနာရီလောက် ကန်ပက်လက်မြို့ထဲကို ပြန်ထွက်ကြတယ် မိဘမဲ့ကလေးတွေဆီသွားတယ် လှူစရာပါလာတဲ့သူတွေ...
Yoga Post for Back Pain.....
ကျွန်မနဲ့ ညီအစ်မသဖွယ်ချစ်ခင်ရတဲ့ မမ၀သုန်တစ်ယောက် ခါးနာနေတာလို့သတင်းကြားတာနဲ့ ဒီပို့စ်လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်း အ...
Bad Wolf ကမ္ဘာလှည့်စာအုပ်ရောင်းဆိုင်ကြီး ရန်ကုန် MEP မှာ စာအုပ်အရောင်းပွဲလာလုပ်တုန်းက ၀ယ်ထားခဲ့တဲ့ စာအုပ်လေး.... ကျွန်မက အစားအသောက်နဲ့ ပေ...
ခုတလော ကျွန်မ သူတို့(ဦးသာဓုနှင့် သားများ)ရဲ့ စာအုပ်တွေကို ဓါတ်ကျနေတာ...။ ဦးသာဓုတို့မိသားစုကို စိတ်ဝင်စားသွားစေတဲ့ စာအုပ်ကတော့ “ဆွေမျ...
Vote for which bread I should bake next!
Bran Buckwheat Banana Muffins
ပုံရိပ်များ အခင်းအကျင်း (39)
Angel Hair Spaghetti + Honey Lemon
အဖြူရောင်တိမ်တိုက်ပါးပါးလေးထဲက မှင် Tattoo